.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: White Blogger Template
ဒီ Template ကို နည်းပညာ၊ ကဗျာ ၊ ဗဟုသုတ စတဲ့ စာပေတွေ ရေးတင်မယ့် သူတွေနဲ့ သီချင်းတွေ ဆော့ဝဲလ်တွေ
တင်ဖို့အတွက်ရော ရည်ရွယ်ပြီးတော့ ဖန်တီးလိုက်တာပါ။ ရိုးရှင်းပြီး သေသပ်လှပတဲ့ Template တစ်ခုဆိုတာ အထူး
ပြောပြစရာတောင် လိုမယ် မထင်ပါဘူး။ အထူးပြုလုပ်ချက်တွေ အနေနဲ့ကတော့ သင့်စက်ထဲမှာ ဇော်ဂျီဖောင့် မရှိလည်း
ဖတ်လို့ ရနိုင်မှာဖြစ်ပြီး Loading ပိုင်းလည်း အလွန် မြန်ဆန်ပါတယ်။ Layout ဒီဇိုင်း ကိုတော့ အကြိုက်ဆုံး ဖြစ်မှာပါ။
နမူနာကြည့်ချင်ရင် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ။ ဒီ Template လေးကို ကြိုက်လို့ သုံးချင်တယ်ဆိုရင် အောက်မှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါပြီ။
Download: White Blogger Template
မှတ်ချက်။ ။ CSS Menu ပါ ထည့်ပေးထားပါတယ်နော်။ ဒီ Template ကို တစ်ခြားဆိုဒ်တွေမှာ ပြန်ရှယ်မယ်ဆိုရင်
ကျွန်တော့်ဆိုဒ်ကို Credit ပြန်ပေးပါ။ အသုံးပြုသူအားလုံးကို အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ အဆင်ပြေကြပါစေလို့...
Posted by Thurainlin at 21:51
Labels: Blog, Template, အသိပေးခြင်း